U LIVE को साथ वेब कैमरा ट्राफिक मोनेटाइज गर्नुहोस्
हाम्रो सीपीए मार्केटिंग आम्दानीलाई हाम्रो भुक्तान-प्रति-बिक्री सम्बद्ध कार्यक्रमको साथ मापन गर्नुहोस्। ड्राइभ प्रयोगकर्ताहरू हाम्रो च्याट रूलेट साइट वा अनुप्रयोगमा र उनीहरूका खरीदहरूको लागि पैसा कमाउनुहोस्।
U LIVE CPA नेटवर्कले तपाईंलाई तपाईंको बढि डेटि,, वयस्क, र वेबक्याम ट्राफिकलाई अधिक बृद्धि गरी मुद्रीकरण गर्न सक्षम गर्दछ। हामी विश्वव्यापी रूपमा काम गर्दछौं र तपाईंको कभरेज बढाउन १ local स्थानीयकरण समर्थन गर्दछौं। तपाईंको वेबसाईटमा वा कहीं नाफा कमाउनको लागि व्यक्तिगत सम्बद्ध लिंक राख्नुहोस्। अर्जित प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएको प्रत्येक खरीदको लागि र सन्दर्भित प्रसारणकर्ताहरू र साझेदारहरू द्वारा उत्पन्न आयको लागि पैसा कमाउनुहोस्।
सन्दर्भित प्रयोगकर्ताहरू द्वारा गरिएको प्रत्येक खरीदको
सम्बद्ध प्रसारणकर्ताहरू र साझेदारहरू द्वारा उत्पन्न राजस्वको
वेबसाइटमा लाइभ च्याट राख्नुहोस्
तपाइँको वेबसाइटमा हाम्रो लाइभ च्याट रूले इम्बेड गर्नुहोस् निवास समय र बृद्धि क्रमलाई बढाउनको लागि। यो डेटि / / वयस्क वेबसाइटहरू मोनेटाइज गर्न सजिलो तरिका हो किनभने एड्सेन्सले त्यस्ता सामग्रीको प्रमोट हुन दिदैन। पार्टनरहरू र तेस्रो पार्टी वेबमास्टरहरू, जसले हाम्रो सम्बद्धहरूलाई उनीहरूको संसाधनहरूमा हाम्रो वेबक्याम च्याट इम्बेड गर्न दिन्छन् उही सम्बद्ध कार्यक्रम सर्तहरू प्राप्त गर्दछन्। एम्बेड कोड फेला पार्न र प्रतिलिपि गर्न वेबसाइट वा एन्ड्रोइड अनुप्रयोगमा सम्बद्ध प्रोग्राम मेनू भ्रमण गर्नुहोस्।
U LIVE अनियमित कुराकानी डेस्कटपहरू, स्मार्टफोनहरू र ट्याब्लेटहरूमा उपलब्ध छन्।
तपाईले चाहानु भएको कुनै पनि ब्राउजर प्रयोग गर्नुहोस्
हाम्रो च्याट रूलेट अनुप्रयोग सबै लोकप्रिय ब्राउजरहरूमा उत्तम काम गर्दछ।
कुनै स्थापना आवश्यक छैन
सबै सुविधाहरू सिधा ब्राउजरमा उपलब्ध छन्, तपाईंले मोबाइल अनुप्रयोग वा विशेष ब्राउजर विस्तार स्थापना गर्नुपर्दैन।
तपाईंले साइन अप गर्न र तपाईंको ईमेल पुष्टि गर्न आवश्यक पर्दैन U LIVE पहुँच गर्न।
U LIVE अनुप्रयोग समीक्षाको लागि भुक्तान गर्नुहोस्
हामी अनुप्रयोग समीक्षा प्रकाशकहरू र ब्लगरहरूको साथ मिलेर सँधै खुशी छौं। हामी लोकप्रिय वयस्क वेबसाइटहरूको मालिकहरूको लागि विशेष सर्तहरू प्रस्ताव गर्दछौं। हामी तपाईंसँग साझेदारी गर्न अगाडि हेर्दै छौं!
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस: hello@ulive.chat
शक्तिशाली सम्बद्ध लिंकको साथ कमाउनुहोस्
केवल तपाईंको व्यक्तिगत सम्बद्ध लिंक पोष्ट गर्नुहोस् जहाँ यो सान्दर्भिक ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्दछ। प्रति बिक्री एफिलिएट नेटवर्क प्रणालीको लागतले सुनिश्चित गर्दछ कि प्रत्येक खरीद गरिएको भुक्तान गरिएको खरीद हो।
केटीहरूलाई वेबक्याम प्रसारक बन्न आमन्त्रित गर्नुहोस्
U प्रत्यक्ष सम्बद्ध साझेदारहरू दुबै प्रयोगकर्ता र प्रसारकहरूबाट नाफा उत्पन्न गर्दछन्। हाम्रो वेबक्याम केटीहरूले हाम्रो पारदर्शी सेवा सर्तहरू, सिमलेस क्यासआउट्स र उनीहरूको पैसामा कष्टप्रद होल्डिंग पिरियडहरू छैनन् भन्ने कुराको कदर गर्दछ। हाम्रो वेबक्याम सम्बद्ध कार्यक्रमको फाइदा लिनुहोस् हामीसँग सामेल हुनको लागि ब्रोडकास्टरलाई आमन्त्रित गरेर। प्रत्येक वेबक्याम प्रसारणकर्ताले तपाईंले रेफर गर्नु भएको 10% राजस्व पाउनुहोस्!
हामी संग ग्लोबल जानुहोस्! हामीले हाम्रो उत्पादनलाई १ languages भाषाहरूमा स्थानीयकरण गरेका छौं हाम्रा सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई एक विशिष्ट बजार कोठा भर्न मद्दत गर्न र प्रतिस्पर्धीहरू (वा किनारहरू) बिना नै धेरै नै राम्रो गर्नका लागि।
तपाईंको सीपीए मार्केटिंग अभियानलाई सशक्त गर्नुहोस् हाम्रो डिजाइन सामग्रीका साथ यू LIVE च्याट रूलेटलाई पूर्णरूपमा ब्रान्ड पहिचानको प्रमोट गर्न।